Hamba minyaka: Sekuyisikhathi sokuthi khumu kweyakwaWilliams kwezomphebezo - Bayede News
Kunesisho sesiZulu esithi, “Okungapheli Kuyahlola”, lokhu kusho ukuthi ayikho into engapheli. NgoLwesine ekuseni ngeledlule ngibukele kuthelevishini umdlalo owandulela owamanqamu womphebezo womqhudelwano i-Australian Open lapho bekutholene khona uNaomi Osaka noSerena Williams. Kulo mdlalo bengingomunye wabantu abebefisa ukuthi kunqobe intokazi yakwaWilliams kodwa kwala khona njengoba lo mdlalo sekuwumlando ukuthi ugcine unqotshwe uNaomi ngo-6:3, 6:4. Ukunqoba kwakhe kwephule izinhliziyo zabantu abaningi.
Iqiniso ukuthi ziningi izinhliziyo zabantu azithathekile uSerena, ngalokho besifisa ukuba afice amarekhodi asahlezi kulo mdlalo. Lawo marekhodi awokulingana noMargaret Court osahamba phambili ngokunqoba amaGrand Slam amaningi angama-24 kanti uSerena yena unqobe angama-23.
Elinye irekhodi ebesifisa ilephule le ntokazi elokuthi ibe ngehamba phambili emlandweni ukunqoba i-Australian Open kayisi-8 okuyimanje bayalingana noMargaret njengoba benqobe kayisi-7. Indlela ahlulwe ngayo uSerena ingivezele ukuthi sekudlala uthando, umzimba kanye neminyaka akusamuvumeli ukuthi usengamelana nezikhwishikhwishi ezifana noNaomi osekuwumlando ukuthi uyena umpetha walo nyaka we-Australian Open.
Intokazi yakwaWilliams ineminyaka yobudala engama-39, kungekudala izobe ihlanganisa engama-40. Ngokwami sengibona sekuyifanele le ntokazi ukuthi imemezele ukuthi isiyashiya kulo mdlalo, isikhathi sayo sesiphelile. Lesi sisho esithi “Okungapheli Kuyahlola” singena khaxa kule ngosi.
Usekwenze konke kulo mdlalo njengoba aqala ukudlala umphebezo okhokhelwayo ngonyaka we-1995 lokho kusho ukuthi lona unyaka wama-26 edlala esigabeni esikhokhelwayo. UNaomi lo abedlala naye owandulela owamanqamu wayengakazalwa uSerena eqala ukudlala esigabeni esikhokhelwayo kwazise uneminyaka yobudala engama-23.
USerena utshengise ukuba nekhono eliyisimanga ngaphezulu kukadadewabo uVenessa. Lezi zintokazi ziqeqeshwa ngabantu ababodwa uRichards Williams ongubaba wazo, uPatric Mouratoglou no-Orance Price owayeshade noyise walezi zintokazi. Eminyakeni eli-15 esesigabeni esikhokhelwayo uSerena awukho umqhudelwano kwemine ngaphansi kweGrand Slam angawunqobanga. Uma kukhulunywa ngeGrand Slam ngaphansi kwayo kukhulunywa nge-US Open, iFrench Open, iWimbledon ne-Australian Open.
Ngokomlando unqobe i-US Open kayisi-6 ngonyaka we-1999, ngowezi-2002, ngowezi-2008, ngowezi-2012, ngowezi-2013 nangowezi-2013. IFrench Open usayinqobe kathathu ngonyaka wezi-2002, ngowezi-2013 nangowezi-2015. iWimbledon uyinqobe kayisi-7 ngonyaka wezi-2002, ngowezi-2004, ngowezi-2009, ngowezi-2010, ngowezi-2012, ngowezi-2015 nangowezi-2016. I-Australian Open ayinqobe kayisi-7 ngonyaka wezi-2003, ngowezi-2005, ngowezi-2007, ngowezi-2009, ngowezi-2010, ngowezi-2015 nangowezi-2017.
Ukunqoba le miqhudelwano engenhla kuyinto enzima kodwa le ntokazi yakwaWilliams isinqobe amahlandla angama-23 lokho kusho ukuthi iyibekile induku ebandla kulo mdlalo. Kungokwakwabani ukuthi ukeliswe endaweni yokuqala iminyaka engaphezulu kweli-10. Le ntokazi ikwenzile lokho njengoba yahlala esicongweni kusukela ngonyaka wezi-2002 kuya kunyaka wezi-2017.
Ngisho kwayena uNaomi ngeledlule ulibeke ngembaba elokuthi uyakuthokozela njalo ukubhekana noSerena kwazise uhlezi ezofunda lukhulu kuyena ngoba umubeka njengohamba phambili kwabesifazane kulo mdlalo. USerena kuyimanje ngokwezikleliso zenhlangano ephethe ezomphebezo emhlabeni iWomen Tennis Association (WTA), usendaweni yeshumi.
Kuvuke iminjunju kuNyanda ebalisa kuKhomishini
Kuyinto enhle ukuyeka ngesikhathi bonke abantu besafisa ukuthi udlale, kunokuthi uyeke abantu bengasayizwa indaba yakho. Ingakho ngithi sekuyisikhathi sokuthi intokazi yakwaWilliams ihlale phansi siyikhumbule ngemisebenzi yayo emihle.
Ngaphandle kokunqoba amaGrand Slam angama-23, namagolide omqhudelwano omkhulu obizwa ngama-Olympics Games. Kuma-Olympics Games wanqoba indondo yegolide ebambisene nodadewabo kathathu ngonyaka wezi-2000 eSydney, ngowezi-2008 eBeijing nangonyaka wezi-2012 eLondon. Kanti uyinqobe yedwa ngonyaka wezi-2012.
Ngonyaka wezi-2018 wathola indondo eyakhombisa ukuthi uzenzelile igama kulo mdlalo ebizwa ngokuthi iPlayer of the Open Era. Kunobhutshuzwayo uSerena angafaniswa noLionel Messi noma noCristiano Ronaldo kanti kuFormula One (F1) angafaniswa noLewis Hamilton.
Ngingajabula uma uNaomi engangena ezicathulweni zikaSerena, iminyaka isamuvumela futhi unekhono elimangalisayo.